Ugonyuluka ngobunzima adlule kubo u-Unathi | Ilanga News
Home Impilo Ugonyuluka ngobunzima adlule kubo u-Unathi
Ugonyuluka ngobunzima adlule kubo u-Unathi
Eshiya kwiMetro FM nokwehlukanisa nomyeni
LIBONGE ukwe-sekwa nxazonke ijaji le-Idols SA, u-Unathi Nkayi, kulandela ukubhoboka kwakhe okokuqala ngqa ngempilo yakhe emuva kokushiya emsakazweni iMetro FM nokwehlukanisa nomyeni wakhe uThomas Msengana.
U-Unathi uthi bese kufike isikhathi sokuba aphefumule ngezehlo azichaze njengezimqinisile endleleni nakuba bekungelula ngoba phezu kwabebhekene nakho ubebuye athole ukugxekwa ezinkundleni zokuxhumana.
U-Unathi usho lokhu emuva kokugonyuluka ngezithinta impilo yakhe yangasese ehlanganisa idivosi, ukudicilelwa phansi kwegama lakhe ezinkundleni zokuxhumana nokushiya emsakazweni iMetro FM emuva kweminyaka engu-10 engomunye wabethuli bo-hlelo lwasekuseni iThe First Avenue.
Ekhuluma ohlelweni lukaPearl Thusi, iBehind The Story, olusakazwa kwiBET, u-Unathi uphinde waveza ukuthi uzobhala incwadi ekhuluma ngempilo yakhe.
Ngesikhathi kusabalala izindaba zokwehlukanisa kwakhe kwaba ne-mibiko ethi imbangela yalokhu kwaba wukuthi umyeni wakhe wangaleso sikhathi wayethumelana imilayezo nezithombe zocansi no-munye wesifazane ongumhleli we-phephandaba langempelasonto.
Nakuba kwaba nemibiko yoku-thi lesi sizathu ngesinye semibandela eyafakwa kwi-affidavit yesehlukaniso, u-Unathi uthe akuyiso kuphela isizathu esaholela ekugqashukeni kwefindo lomshado.
“Sobabili sibe nesandla ekupheleni komshado, okungasho ukuthi kasisezwani ngoba sise-ngabazali kubantwana bethu
UKUNGCOFWA EZINKUNDLENI ZOKUXHUMANA
Uthi abukho ubuhlungu abuzwile njengokungesekwa kuleli kunalokho ubethola ukungcofwa ngabe-sifazane ezinkundleni zokuxhumana, bemgxeka bethi akakwazi ukucula.
“Kungithathe isikhathi ukuba ngiphebeze onke amagama abeshiwo, ngigxile ethalenteni lami ebengilithatha njengesiphiwo sokwelapha abantu.”
Uthi omunye umzuzu owaba nzi-ma yingesikhathi emiswa emsakazweni iMetro ngo-2015 emuva kokuba eziphendulele ngamagama alumelayo kowesifazane owayemhlambalaza kwiTwitter.
Ukubhekana naleso sikhathi esinzima uthi wabhala iculo elithi “Sonini” asebenzisane noDJ Merlon.
lona ngakhipha bo-nke ubuhlungu engangibuzwa ngapha-kathi.”
U-Unathi uthi obengumyeni wakhe uThomas,
ongumethuli wohlelo iThomas and Pearl kwi-Metro FM, ubengumngani wakhe omkhulu kodwa okumanje sebeqhelelene kakhulu. Ubonge ukwesekwa nguyise obe yinsika edlula esikhathini sobu-nzima.
UFUNA UKUBA UMZALI OQOTHO
Ezingqinambeni zempilo abhekene nazo, u-Unathi uthi ugqugquzelwa ngabantwana bakhe ababili afisa ukuba yisibonelo ngokuba ngumzali oqotho kubona.
Wathola ukunconywa ngesikhathi evakashise indodakazi yakhe eneminyaka engu-8 kuma-auditions e-Idols SA ezinyangeni ezimbalwa eze-dlule.
Nakuba ethi uzizwa sengathi wethuleke
umthwalo emuva kokugonyuluka, uthi uzwelana kakhulu nalabo abebemenza inhlekisa ngoba ubuhlungu abebebukhiphela kuyena
buchaza ubuhlungu ababhekene nabo mihla namalanga.
Previous articleUsazophathwa yikhanda umqeqeshi weChiefs
Next articleUfuna kubuyiselwe emphakathini uNtuli